Jehovha Mwari Akanaka, “Kunaka Kwake Kukuru Sei!” | Swedera Pedyo
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
1, 2. Kunaka kwaMwari kwakakura sei, uye Bhaibheri rinokusimbisa zvakadini?
SHAMWARI dzine chitsama dzave nenguva dzichiwirirana, dzinodyira panze dzakadziya zvadzo mushana wemadeuka zuva, dzichiseka nokutaura sezvadzinoyemura kuona zuva richinyura. Kure kubva ipapo, murimi anotarisa kuminda yake onyemwerera nokugutsikana nemhaka yokuti makore akasvibirira amisa, uye madonhwe emvura ava kutanga kuti do do do achiwira pazvirimwa zvanga zvaomerwa. Kumwewo, murume nomudzimai vanofadzwa nokuona mwana wavo achitanga kudhanaira.
2 Vangava vachizviziva kana kuti vasingazvizivi, vanhu vakadaro vose vari kubatsirwa nechinhu chimwe—kunaka kwaJehovha Mwari. Vanhu vanonamata vanowanzodzokorora mashoko okuti “Mwari akanaka.” Bhaibheri rinotosimbisa izvi kupfuura ipapa nokure. Rinoti: “Kunaka kwake kukuru sei!” (Zekaria 9:17, NW) Asi zvinoratidza sokuti vashomanana nhasi vanonyatsoziva zvinoreva mashoko iwayo chaizvo. Kunaka kwaJehovha Mwari kunosanganisirei chaizvo, uye kunaka kwaMwari uku kunoitei kumumwe nomumwe wedu?
Rutivi Runoshamisa Rworudo rwaMwari
3, 4. Kunaka chii, uye nei kunaka kwaJehovha kungarondedzerwa zvakanakisisa sokuratidzwa kworudo rwake?
3 Mumitauro mizhinji yemazuva ano, “kunaka” rinenge rinongova shokowo zvaro. Zvisinei, sezvinoratidzwa muBhaibheri, kunaka hakusi shokowo zvaro. Zvikurukuru kunoreva tsika dzakanaka kwazvo. Saka neimwe pfungwa, tingati kunaka kwakazara muna Jehovha. Unhu hwake hwose—kusanganisira simba rake, ruramisiro yake, uye uchenjeri hwake—zvose zvakanaka pazvose. Kunyange zvakadaro, kunaka kungarondedzerwa zvakanakisisa sokuratidzwa kworudo rwaJehovha. Nei?
4 Kunaka unhu hunoratidzwa nezviito kune vamwe. Muapostora Pauro akaratidza kuti muvanhu kunokwezva kupfuura kururama. (VaRoma 5:7) Munhu akarurama anogona kutarisirwa kutevera nokuvimbika zvinodiwa nomutemo, asi munhu akanaka anoita zvinopfuura ipapo. Ndiye anotanga kutsvaka nzira dzokubatsira nadzo vamwe. Sezvatichaona, Jehovha ndiwo manakire aakaita iwayo zvechokwadi. Sezviri pachena, kunaka kwakadaro kunobva murudo rwaJehovha rusingaperi.
5-7. Nei Jesu akaramba kudanwa achinzi “Mudzidzisi Akanaka,” uye ichokwadi chipi chinokosha chaakasimbisa ipapo?
5 Jehovha akasiyanawo nevamwe mukunaka kwake. Isiri nguva refu Jesu asati afa, mumwe murume akaenda kwaari kunobvunza mubvunzo, achimudana nemashoko okuti “Mudzidzisi Akanaka.” Jesu akapindura kuti: “Nei uchinditi akanaka? Hapana munhu akanaka, kunze kwomumwe chete, Mwari.” (Mako 10:17, 18) Ee, mhinduro iyoyo ingakushamisa kwazvo. Nei Jesu akaruramisa murume wacho? Jesu chaizvo akanga asiri “Mudzidzisi Akanaka” here?
6 Sezviri pachena, murume wacho akanga ari kushandisa mashoko okuti “Mudzidzisi Akanaka” sezita rokuremekedza achibata kumeso. Jesu nenzira yokuzvininipisa akati mbiri yakadaro ipiwe Baba vake vokudenga, avo vakanaka mupfungwa yakakwana. (Zvirevo 11:2) Asi Jesu akanga ari kusimbisawo chimwe chokwadi chakadzama. Jehovha bedzi ndiye chiyereso chezvakanaka. Iye bedzi ndiye ane kodzero sachangamire yokusarudza zvakanaka nezvakaipa. Adhamu naEvha, nokudya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa vachipandukira, vakatsvaka kutora kodzero iyoyo pachavo. Kusiyana navo, Jesu nokuzvininipisa anosiyira kuna Baba vake zvokugadzwa kwemitemo.
7 Uyezve, Jesu aiziva kuti Jehovha ndiye tsime rezvose zvakanaka zvechokwadi. Ndiye Mupi we“zvipo zvose zvakanaka nezvinopiwa zvose zvakakwana.” (Jakobho 1:17) Ngationgororei kuti kunaka kwaJehovha kunooneka sei murupo rwake.
Uchapupu Hwokunaka Kukuru kwaJehovha
8. Jehovha akaratidza sei kunaka kuvanhu vose?
8 Munhu wose ati amborarama akabatsirwa nokunaka kwaJehovha. Pisarema 145:9 rinoti: “Jehovha une mwoyo wakanaka kuna vose.” Ndeipi mimwe mienzaniso yokunaka kwake kuvose? Bhaibheri rinoti: Haana “kuzvisiya asina uchapupu pakuti akaita zvakanaka, achikupai mvura inobva kudenga nemwaka inobereka zvibereko, achizadza mwoyo yenyu zvikuru kusvika pakuzara nezvokudya nomufaro.” (Mabasa 14:17) Wakambonzwa kufara uchidya zvokudya zvinonaka here? Dai kwakanga kusiri kunaka kwaJehovha uyo akagadzira pasi nemvura yapo yakachena inogara ichitenderera ne“mwaka inobereka zvibereko” kuti pave nezvokudya zvakawanda, kwaisazova nezvokudya. Jehovha haangoitiri zvakanaka kudaro kune vanomuda chete asi kuvanhu vose. Jesu akati: Vano“ita kuti zuva ravo ribudire vanhu vakaipa nevakanaka uye vachiita kuti kunaye pavanhu vakarurama nevasina kururama.”—Mateu 5:45.
Jehovha ari ku“kupai mvura inobva kudenga nemwaka inobereka zvibereko”
9. Apuro rinoenzanisira sei kunaka kwaJehovha?
9 Vazhinji vanorerutsa rupo rukuru rwakaratidzwa vanhu nemhaka yokuti zuva rinoramba richingopisa, mvura ichingonaya uye mwaka yokubereka zvibereko ichingouya. Somuenzaniso, funga nezveapuro. Munzvimbo dzose dzinodziya dzenyika, muchero wakazara. Asi rakanaka, rinonaka chaizvo kudya, uye rakazara nemuto unonyevenutsa nezvinovaka muviri zvinokosha. Waizviziva here kuti munyika yose kune marudzi 7 500 emaapuro, akasiyana-siyana ruvara kubva kumatsvuku kusvika kune akatsvukuruka kune eyero kusvika kune akasvibirira semazhizha uye paukuru kubva pamaduku semaonde kusvika kune akakura semandimu? Kana ukabata mhodzi duku-duku yeapuro muruoko rwako, inoratidza seisina maturo. Asi kubva mairi munokura mumwe wemiti yakanakisisa. (Rwiyo rwaSoromoni 2:3) Chirimo choga choga muapuro unoshongedzwa nemaruva akanaka anotumbuka; mumatsutso oga oga unobereka zvibereko. Gore negore—kwemakore anosvika 75—paavhareji muapuro uchabereka michero yakawanda zvokuzadza makatoni 20 anorema makirogiramu 19 rimwe nerimwe!
Kubva pamhodzi dukuduku iyi panokura muti unogona kupa vanhu zvokudya nokuvafadza kwemakumi emakore
10, 11. Pfungwa dzinoratidza sei kunaka kwaMwari?
10 Mukunaka kwake kusingaperi, Jehovha akatipa muviri wa“kaitwa nomutoo . . . unoshamisa,” nepfungwa dzakaitirwa kutibatsira kunzwisisa mabasa ake nokufadzwa nawo. (Pisarema 139:14) Funga zvekare nezvezviitiko zvinorondedzerwa panotangira chitsauko chino. Kuona chii kunounza mufaro panhambo dzakadaro? Chiso chinopenya chomwana ari kufara. Dzvotsvotsvo remvura iri kunaya muminda. Mavara-mavara ezuva rava kunyura. Ziso romunhu rakagadzirirwa kuti rione mavara akasiyana-siyana anopfuura 300 000! Uye pfungwa dzedu dzokunzwa dzinobata misiyano miduku-duku yemanzwi anodiwa, kuvhuvhuta kwemhepo nomumiti, kuseka kwokufara kwendumure. Nei tichikwanisa kufara nokuona pamwe nokunzwa zvinhu zvakadaro? Bhaibheri rinoti: “Nzeve, inonzwa, neziso, rinoona, Jehovha wakazviita zvose.” (Zvirevo 20:12) Asi idzodzo dzinongova pfungwa mbiri chete.
11 Pfungwa yokunhuwidza ndohumwe uchapupu hwokunaka kwaJehovha. Mhino yomunhu inogona kusiyanisa kunhuwirira 10 000 kwakasiyana. Imbofunga nezvekushomanana kwacho: zvokudya zvaunofarira zviri kubikwa, maruva, mashizha akawa, utsi hushoma hwomoto unodziya. Uye pfungwa yako yokunzwa nokubata inoita kuti ukwanise kunzwa kutonhorera kwemhepo kumeso kwako, kumbundira kwoushamwari kwomudiwa, kutsvedzerera kunogutsa kwomuchero uri muruoko rwako. Paunoruma, pfungwa yako yokuravidza inotanga kushanda. Unotanga kunzwa manakiro acho sezvo mukanwa mako munonzwa kunaka kwomuto wakaoma kunzwisisa womuchero uyu. Hungu, tine zvikonzero zvakawanda zvokudanidzira nezvaJehovha tichiti: “Haiwa, zvakanaka zvenyu zvamakachengetera vanokutyai zvakakura sei.” (Pisarema 31:19) Zvisinei, Jehovha “akachengetera” sei vanomutya kunaka?
Kunaka Kunobatsira Nokusingaperi
12. Ndezvipi zvatinopiwa naJehovha zvinokosha pane zvose, uye nei?
12 Jesu akati: “Zvakanyorwa kuti, ‘Munhu anofanira kurarama, kwete nechingwa choga, asi nokutaura kwose kunobuda mumuromo maJehovha.’” (Mateu 4:4) Zvechokwadi, zvinhu zvomudzimu zvatinopiwa naJehovha zvinogona kutibatsira zvikuru kutopfuura zvenyama, nokuti zvinotungamirira kuupenyu husingaperi. Muchitsauko 8 chebhuku rino tinoona kuti Jehovha akashandisa simba rake rokudzorera mumazuva ano okupedzisira kuti aunze paradhiso yomudzimu. Chinhu chinokosha paparadhiso iyoyo ndezvokudya zvomudzimu zvakawanda.
13, 14. (a) Muprofita Ezekieri akaonei mune zvaakaratidzwa, zvichirevei kwatiri nhasi? (b) Urongwai hwomudzimu hunopa upenyu uhwo Jehovha anoita nokuda kwevashumiri vake vakatendeka?
13 Mune humwe hwouprofita hukuru hweBhaibheri hwokudzorera, muprofita Ezekieri akaratidzwa temberi yakadzorerwa uye ine mbiri. Hova yemvura yaiyerera kubva mutemberi iyoyo, ichiramba ichifara nokudzika sezvayaienda kusvika yava “nzizi mbiri.” Kwose kwarwaiyerera nakwo rwizi rwacho rwaibatsira. Pamhenderekedzo dzarwo paikura miti yaipa zvokudya nokuporesa. Uye rwizi rwacho rwakatounza upenyu pamwe nezvibereko paGungwa Rakafa rakanga rine munyu risina upenyu! (Ezekieri 47:1-12) Asi zvose izvozvo zvairevei?
14 Zvaakaratidzwa zvacho zvaireva kuti Jehovha aizodzorera urongwa hwokunamata kwakachena, sezvairatidzwa netemberi iyo Ezekieri akaona. Kufanana norwizi irworwo rwaakaratidzwa, zvaizopiwa naJehovha nokuda kwoupenyu zvaizoyerera zvichienda kuvanhu vake zvichiramba zvichiwanda. Kubva pakudzorerwa kwokunamata kwakachena muna 1919, Jehovha akakomborera vanhu vake nezvinhu zvaakavapa zvinopa upenyu. Sei? MaBhaibheri, mabhuku eBhaibheri, misangano, uye kokorodzano zvose zvakashanda kuti zviunze chokwadi chinokosha kumamiriyoni. Nenzira dzakadaro Jehovha akadzidzisa vanhu pamusoro pechipo chinokosha kupfuura zvose pazvipo zvake nokuda kwoupenyu—chibayiro chorudzikinuro chaKristu, icho chinounza kumira kwakachena pamberi paJehovha netariro youpenyu husingaperi kune vose avo vanoda nokutya Mwari zvechokwadi. * Nokudaro mumazuva ano okupedzisira ose, kunyange zvazvo nyika iri kutambura nenzara yomudzimu, vanhu vaJehovha vari kufara nezvokudya zvomudzimu.—Isaya 65:13.
15. Kunaka kwaJehovha kuchayerera kuchienda kuvanhu vakatendeka mupfungwai munguva yoKutonga kwaKristu Kwemakore Ane Chiuru?
15 Asi rwizi urwo Ezekieri akaratidzwa harumiri kuyerera apo nyika ino yekare inoguma. Kusiyana neizvi, ruchayerera zvakatowedzera muKutonga kwaKristu Kwemakore Ane Chiuru. Ipapo achishandisa Umambo hwaMesiya, Jehovha achashandisa ukoshi hwakazara hwechibayiro chaJesu, achiita kuti zvishoma nezvishoma vanhu vakatendeka vasvike pakukwana. Tichafara zvikuru panguva iyoyo nokuda kwokunaka kwaJehovha!
Zvimwe Zvinowedzera Kunaka kwaJehovha
16. Bhaibheri rinoratidza sei kuti kunaka kwaJehovha kunosanganisira humwe unhu, uye ndohupi humwe hwacho?
16 Kunaka kwaJehovha kunosanganisira zvinopfuura rupo. Mwari akaudza Mosesi kuti: “Ndichapfuudza kunaka kwangu kwose pamberi pako, nokudana zita raJehovha pamberi pako.” Nhoroondo yacho inozoti: “Jehovha akapfuura pamberi pake, akadanidzira, achiti: Jehovha, Jehovha, Mwari uzere nyasha nengoni, unononoka kutsamwa, une tsitsi huru nezvokwadi.” (Eksodho 33:19; 34:6) Naizvozvo kunaka kwaJehovha kunosanganisira unhu hune zvinhu zvakati kuti zvakanaka. Ngationgororei zviviri bedzi zvaizvozvi.
17. Nyasha chii, uye Jehovha akadziratidza sei kuvanhuwo zvavo vasina kukwana?
17 “Nyasha.” Unhu uhwu hunotiudza zvakawanda pamusoro penzira yaJehovha yokubata nayo nezvisikwa zvake. Panzvimbo pokuva asina ushamwari kana kuti ane utsinye, sezvinowanzoitwa nevane simba, Jehovha munyoro uye ane mutsa. Somuenzaniso, Jehovha akati kuna Abrama: “Simudza hako [“ndapota,” NW] meso ako ipapo paugere, utarire kurutivi rwokumusoro, norwenyasi, norwokumabvazuva, norwokumavirira.” (Genesi 13:14) Shanduro dzeBhaibheri dzakawanda dzinosiya shoko rokuti “ndapota.” Asi nyanzvi dzeBhaibheri dzinoti mashoko echiHebheru chapakuvamba anobatanidza mashoko anochinja mutsetse kubva pakurayira uchiva chikumbiro chokuzvininipisa. Kune zvimwe zviitiko zvakadai. (Genesi 31:12; Ezekieri 8:5) Fungidzira, Changamire wezvinhu zvose anoti “ndapota” kuvanhuwo zvavo! Munyika umo ukasha, kumanikidza, uye jinyu zvakazara, hazvizorodzi here kufunga nezvenyasha dzaMwari wedu, Jehovha?
18. Jehovha “uzere . . . nezvokwadi,” mupfungwai, uye nei mashoko iwaya achikurudzira?
18 “Uzere . . . nezvokwadi.” Kusatendeseka ndiyo yazova tsika munyika yanhasi. Asi Bhaibheri rinotiyeuchidza kuti: “Mwari haazi munhu, haangarevi nhema.” (Numeri 23:19) Chaizvo, Tito 1:2 inotaura kuti “Mwari asingamborevi nhema.” Akanaka kwazvo kuti adaro. Nokudaro, zvipikirwa zvaJehovha zvinogona kuvimbwa nazvo kwazvo; mashoko ake, ane chokwadi chokuzadzika nguva dzose. Jehovha anotonzi “Mwari wazvokwadi.” (Pisarema 31:5) Haangoregi kureva nhema chete asi anotaura chokwadi chakawanda. Haavanzi, haavigi mashoko, kana kuti kuita zvepachivande; asi anojekesera kwazvo vashumiri vake vakatendeka kubva mudura rake risina mugumo rouchenjeri. * Anotovadzidzisa nzira yokurarama nayo mukuwirirana nechokwadi chaanovapa kuitira kuti vagone “kufamba muchokwadi.” (3 Johani 3) Kunaka kwaJehovha kunofanira kutiita kuti tinzwe sei isu pachedu?
‘Farirai Kunaka kwaJehovha’
19, 20. (a) Satani akatsvaka kuchera chivimbo chaEvha mukunaka kwaJehovha sei uye zvakaguma nei? (b) Kunaka kwaJehovha nenzira yakakodzera kunofanira kutiita kuti tinzwe sei, uye nei?
19 Satani paakaedza Evha mubindu reEdheni, akatanga nokubvisa kuvimba kwaaiita nokunaka kwaJehovha nenzira yemanomano. Jehovha akanga audza Adhamu kuti: “Ungadya hako miti yose yomunda.” Pazviuru zvemiti inofanira kuva yaishongedza bindu iroro, mumwe bedzi ndiwo wakanzi naJehovha usabatwa. Asi ona kuti Satani akaronga sei mashoko omubvunzo wake wokutanga kuna Evha: “Nhai, ndizvo here kuti Mwari wakati: Regai kudya miti yose yomunda?” (Genesi 2:9, 16; 3:1) Satani akamonyanisa mashoko aJehovha kuti aite kuti Evha afunge kuti Jehovha akanga ari kumunyima chimwe chinhu chakanaka. Zvinosiririsa kuti zano racho rakashanda. Evha, kufanana nevarume nevakadzi vakawanda vakamutevera, akatanga kusava nechokwadi nokunaka kwaMwari, uyo akanga amupa zvose zvaaiva nazvo.
20 Tinoziva ukuru hwenhamo nokusuruvara zvakaunzwa nokusava nechokwadi kwakadaro. Naizvozvo ngatichengete mumwoyo yedu mashoko aJeremia 31:12 okuti: ‘Vachafarira kunaka kwaJehovha.’ Kunaka kwaJehovha kunofanira zvechokwadi kutiita kuti tipenye nomufaro. Hatifaniri kumbonzwa tisina chokwadi nevavariro dzaMwari wedu, uyo akazara kudaro nokunaka. Tinogona kuvimba naye zvizere, nokuti hapana chimwe chinhu chaanoda kunze kwezvakanaka nokuda kwevanomuda.
21, 22. (a) Ndedzipi dzimwe nzira dzauchada kuratidza nadzo kuti unoonga kunaka kwaJehovha? (b) Unhu hupi hwatichakurukura muchitsauko chinotevera, uye hwakasiyana pakudini nokunaka?
21 Uyezve, patinowana mukana wokutaura nevamwe pamusoro pokunaka kwaMwari, tinofara. Nezvevanhu vaJehovha, Pisarema 145:7 rinoti: “Vachareva vachiyeudzira kunaka kwenyu kukuru, nokuimbira [“kunaka,” NW] kwenyu.” Zuva rimwe nerimwe ratinorarama, tinobatsirwa neimwe nzira nokunaka kwaJehovha. Unodii kuiita tsika yako kuonga Jehovha zuva nezuva nokuda kwokunaka kwake, uchitaura zvakajeka sezvinobvira? Kufunga nezvokunaka uku, kuonga Jehovha zuva nezuva nokuda kwako, uye kuudza vamwe nezvakwo zvichatibatsira kutevedzera Mwari wedu akanaka. Uye sezvatinotsvaka nzira dzokuita nadzo zvakanaka, sezvinoita Jehovha, ticharamba tichiswedera pedyo naye. Muapostora Johani akanga akwegura akanyora kuti: “Anodiwa, iva mutevedzeri, kwete wezvakaipa, asi wezvakanaka. Uyo anoita zvakanaka anobva kuna Mwari.”—3 Johani 11.
22 Kunaka kwaJehovha kunewo chokuita nohumwe unhu hwake. Somuenzaniso, Mwari “une tsitsi huru,” kana kuti rudo rwakavimbika. (Eksodho 34:6) Unhu uhwu hwakananga zvikuru kupfuura kunaka, nokuti Jehovha anonyanya kuzviitira kuvashumiri vake vakatendeka. Muchitsauko chinotevera, tichadzidza kuti anoita sei kudaro.
^ ndima 14 Hapangagoni kuva nomuenzaniso wokunaka kwaJehovha unopfuura rudzikinuro. Pamamiriyoni ose ezvisikwa zvomudzimu izvo Jehovha aigona kusarudza chimwe chazvo, Jehovha akasarudza Mwanakomana wake anodiwa, mumwe woga kuti atifire.
^ ndima 18 Nokuda kwechikonzero chakanaka, Bhaibheri rinobatanidza chokwadi nechiedza. “Tumai chiedza chenyu nezvokwadi yenyu,” akaimba kudaro munyori wePisarema. (Pisarema 43:3) Jehovha anoratidza chiedza chomudzimu chakawanda kune avo vanoda kudzidziswa, kana kuti kuvhenekerwa naye.—2 VaKorinde 4:6; 1 Johani 1:5.
1 Madzimambo 8:54-61, 66 Soromoni akaratidza sei kuonga kunaka kwaJehovha, uye izvozvo zvakaita kuti vaIsraeri vanzwe sei?
Pisarema 119:66, 68 Minyengetero yedu ingaratidza sei chido chokutevedzera kunaka kwaJehovha?
Ruka 6:32-38 Chii chinogona kubatsira kutikurudzira kutevedzera muitiro waJehovha worupo?
VaRoma 12:2, 9, 17-21 Tingaratidza sei kunaka muupenyu hwedu hwezuva nezuva?
Zuva roga roga, Mwari anoita kuti vanhu vabatsirwe nezvakanaka zvakawanda zvaanoita, kunyange vaya vasingamuongi zvachose.